Goorma ayay Kooxda Manchester United dhammaystiraysaa saxiixa Jadon Sancho? – Gool FM
(Manchester) 04 Agoosto 2020. Waxaa la shaaciyey waqtiga ay kooxda kubadda cagta Manchester United dhammaystirayso saxiixa ciyaaryahanka ay muddada daba socotay ee Jadon Sancho.
Sida wararku ay sheegayaan Manchester United ayaa dhammaystiraysa heshiiska ay kula soo wareegayso Weeraryahan Jadon Sancho dhammaadka Isbuucaan.
Xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Jadon Sancho ayaa kalsooni ku qaba inuu noqon doono ciyaaryahan Manchester United ah dhammaadka todobaadkan, kaddib isbedellada ku yimid wadahadalka.
Labada kooxood ayaa wahadal horumarsan ka gaaray heshiiska uu xiddigan xulka qaranka England ugu wareegayo garoonka Old Trafford.
Man United ayaa ka caga-jiideysay inay ku wareejiso lacagta faraha badan ee ay sheegatay Dortmund, laakiin Jariiradda The Independent ayaa soo jeedineysa in heshiis ugu dambeyn si horudhac ah loo gaaray, isla markaana ay Man Utd marka hore bixinayso 60 milyan oo gini oo ay macquul tahay inay gaarsiiyaan ilaa 120 milyan oo gini balse dhowr jeer la kala bixinayo.
Xiddiga ka soo baxay akadeemiga Kooxda Manchester City ee Sancho ayaa la warinayaa inuu dhankiisa heshiiska shaqsiga ah la gaaray Red Devils, waxaana la sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu halkaas ka bilaabo cutub kale oo mustaqbalkiisa ah.
Sancho ayaa saddex xilli ciyaareed ku qaatay horyaalka Bundesliga, waxaana uu wadar ahaan goolal iyo caawinba loo diiwaan geliyey 59 gool labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyey.